Etu ị ga - esi amata ụdị ion nke ndị na - emepụta ihe na - eweta polyacrylamide | Oubo
Otu esi amata ụdị ion nke polyacrylamide
Dị ka ụdị ion, polyacrylamide nwere ike kewaa: anionic polyacrylamide ,cationic polyacrylamide na- abụghị ionic polyacrylamide.
Kedu ka esi emepụta polyacrylamide ụdị ụdị polyacrylamide ion:
Ndị na-emepụta Polyacrylamide nwere ụlọ nyocha ọkachamara. Na mgbakwunye na ịnwale ihe ndị na-egosi teknụzụ nke ngwaahịa kwa ụbọchị, ọrụ laabu chọrọ ịnwale ihe ndị dị na mpụga. Dị ka ọ dị, mgbe ị na-anata ihe nlele dị na mpụga, a ga-ebu ụzọ chọpụta ụdị ion nke ngwaahịa ahụ. Yabụ otu esi amata ọdịiche dị n'ụdị ion? Azịza ya bụ: ihe ntanetị maka nyocha nke ndị si mba ọzọ. Anionic polyacrylamide na-abụghị ionic polyacrylamide na-iche site ịchọputa ogo hydrolysis. Ogo nke hydrolysis nke anionic polyacrylamide dị gburugburu 25, na ogo nke hydrolysis nke na-abụghị ionic polyacrylamide dị gburugburu 5. A na-ahụ polation nke dị na ya site na ịchọpụta ogo ion, na ion ogo nke ngwaahịa ntụ ntụ na-agakarị n'etiti 10-60.
Otu esi amata ụdị ion polyacrylamide site na nnwale dị mfe:
Kedu otu esi amata ọdịiche dị n'ụdị ion nke polyacrylamide mgbe ndị ọrụ nọ na saịtị azụmaahịa ma ọ bụ na enweghị ngwa ọrụ nnwale? Nke mbụ, ọ dị anyị mkpa ịnwe ihe atụ nke polyacrylamide anionic na polyacrylamide cionic, ma gbasaa ngwaahịa abụọ a iche iche maka ojiji. Mgbe ahụ gbari ngwaahịa kwesịrị ịchọpụta ụdị ion, ma chọpụta ọdịiche dị na ya site na ime na yang. Wunye ihe ngwọta polyacrylamide gbazee na ngwọta ngwaahịa ka a nwalee ya. Ọ bụrụ na nnukwu flocs na-acha ọcha apụta, ọ pụtara na ihe anwale bụ cationic polyacrylamide. Ọ bụrụ na enweghị mmeghachi omume, ọ pụtara na ọ bụ na-abụghị ionic ma ọ bụ anionic. Mgbe ahụ chọpụta site na ihe ngwọta polyacrylamide cationic, obere flocs na-egosi na ngwaahịa a nwalere bụ polyacrylamide na-abụghị nke ionic, na ọtụtụ flocs na-egosi na ihe anwale a bụ anionic polyacrylamide.
Mkpa ọ dị ịmata ụdị polyacrylamide ion:
Mgbe ị na-amaghị ụdị ngwaahịa a na-eji maka nsị na saịtị, ịmata ụdị ion polyacrylamide nwere ike inyere ndị ọrụ aka nyocha ngwa ngwa maka ụdị ma chọta ngwaahịa ndị na-adaba na mmiri mmiri na saịtị ahụ ngwa ngwa.
Mụta ịchọpụta ụdị ion polyacrylamide, ka ndị ọrụ wee nwee ike ịghọta ngwaahịa ahụ nke ọma, jiri ngwaahịa na ngwaahịa ya ka mma, mara ya, ma kpachara anya maka ndị na-eweta ihe ọjọọ na-aghọgbu ndị ahịa.